Kwiiyure ezintlanu emva kwenyikima yaseWenchuan eChina ngaloo nyaka, uthungelwano lwakhubazeka ngokusisiseko, kwaye izinga lokuxhuma kwefowuni lafumana i-75% kwiyure enye emva kwenyikima yaseLushan. Siyintoni isizathu? Kuxelwe ukuba luxwebhu lwesicwangciso lukazwelonke olukhutshwe liCandelo loMphathiswa Wezemveliso kunye neTekhnoloji yoLwazi nge-22 kaDisemba ngo-2011, esenza unxibelelwano ngenkxaso yexesha likaxakeka kunye noncedo lwenyikima yadlala indima enkulu kwintlekele engu-420 Lushan Earthquake ngendlela.
Isicwangciso sokwahlula unxibelelwano lwangoko kwakwangoko lube ngamabala amane ombala "obomvu o-orenji o-orenji" kunye nokucacisa imigangatho kunye neemeko zokuqalisa kwinqanaba ngalinye. Inyikima yeSichuan Lushan yenze ukuba icebo libe nempembelelo ngakumbi kuneshishini lonxibelelwano kwaye liyaziwa eluntwini. Esi sicwangciso, esathiywa emva kwesicwangciso sequbuliso "esimanzi obomvu e-orenji", saqala ngamanyathelo ekujoliswe kuwo e-China Mobile emva kwenyikima ye-Wenchuan ka-2008
Kuyakhunjulwa ukuba ngexesha inyikima yonyaka ka-Wenchuan ka-2008, iZiko loNcedo lokuThithwa komhlaba ngoNxweme lweSichuan layalela okokuqala "ukulungela" imfuneko. Ngelo xesha, uthungelwano lwaludibene kakhulu, kwaye inkqubo ye-softswitch yayisakhiwa nje, kwaye amava okugcina ayengonelanga. Abahlalutyi bemizi-mveliso ngelo xesha behlalutya ukuba iinyikima zomhlaba ziya kuqhubeka iminyaka emininzi, kwaye kuyimfuneko ukuseka isicwangciso sobuchule, isikhundla, kunye nesicwangciso sokubhalwa kwabantu abaninzi. Igama lohlobo lokuqala lubomvu, i-orange kunye nesilumkiso esiluhlaza.
Kungekudala, iSichuan Mobile yeza nesicwangciso sokuqala “sezonombala o-orenji obomvu” kwaye sabazisa kwi-China Mobile Group. Ngokwabangena ngaphakathi, emva kokuba iSichuan Mobile ingenise ingxelo yokuqala yesicwangciso sequbuliso "ebomvu ye-orenji" kwiqela, i-China Mobile yaququzelela amasebe ahlukeneyo kwikomkhulu, ngelixa idibanisa iinkampani ezihambahambayo zamaphondo ezifana neGuangdong, Jiangsu, Zhejiang, neShanghai, njenge kunye neengcali zeshishini Izixhobo ezibanzi, kubandakanya iingxoxo kunye nohlaziyo.
Isicwangciso sexesha likaxakeka akufuneki sinqumle kuhlobo olunye lwenyikima, kodwa kufuneka sandiswe kwinqanaba eliphezulu. Le yeyona nto isisiseko eyenziweyo liqela laseChina leselula kwisicwangciso sonke. Uqinisekiso lonxibelelwano olukhawulezileyo ayisiyinyikima kuphela, kodwa kunye nezinye iimeko zongxamiseko, ezinje ngezaqhwithi, izikhukula, iintlekele zekhephu, udaka, ukhuseleko kwi-depot yeoyile, iimveliso ezinokuqhushumba ngemichiza, njl njl., Kodwa nezingxamisekileyo, ezinje ngemicimbi yezwe enkulu, lincinci Uluhlu lwemidlalo emikhulu kunye nokunye. Ekugqibeleni, le seti yezicwangciso ezibomvu ze-orenji "zandiswa" zangombala o-orenji obomvu ”, zaza izicwangciso zokuphendula zaqulunqwa ngokweemeko ezahlukeneyo.
Emva koko, i-China Mobile Group yakhupha isicwangciso esithi "i-orenji ebomvu e-orenji" kwiinkampani zamaphondo kwilizwe liphela, kwaye yacela inkampani nganye yephondo ukuba ijonge "kucacile kwaye lucwangciswe" isicwangciso ngokwenqanaba kunye neempawu zangoku.
I-China Mobile iguqule umba wonxibelelwano olungxamisekileyo ukusuka ekuqinisekisweni okujolise kuthungelwano ziqinisekiswa abathengi. Okwangoku kuphela kuqinisekisa ukuba inethiwekhi iyafikeleleka ngexesha lentlekele ngequbuliso, ngelixa eli lokugqibela liqinisekisa ukuba uthungelwano lonxibelelwano lungasetyenziswa ngabasebenzisi abaqhelekileyo ngamaxesha akhethekileyo.
Ngokwengcaciso efunyenweyo, ukusukela kumiselo lwenkqubo yokuqala yesicwangciso sequbuliso "ebomvu e-orenji eluhlaza okwesibhakabhaka" ngoSeptemba ka-2008, ngaphezulu kweminyaka emine ngaphambi kwenyikima yaseLushan, zingama-21 kuphela iiofisi zamasebe eSichuan. Amaxesha ali-1155. Uxinzelelo olukhulu lomsebenzi lwake lwabangela ukuba iinkampani zenqanaba lesixeko zikhalaze, kodwa emva kwenyikima yaseLushan, izikhalazo ezinjalo zafika ngequbuliso.
Nge-20 ka-Epreli ngo-2013, kwimizuzu elishumi emva kwenyikima yase-Lushan, i-China Mobile "Red Orange Yellow Blue" iplani yokuyalela iphume apha. Wonke umntu wasusa esixekweni ngexesha inyikima, wonke umntu wakhawuleza wabuyela kwisikhululo sabo emva kwenyikima. Ngaphandle kwawo nawuphi na umthetho ophambili, inkokeli yewotshi ikhuphe umyalelo kwiphondo ukuba "liphumeze isicwangciso sexesha elibomvu, o-orenji, ophuzi kunye nohlaza okwesibhakabhaka".
Olu lwazi lwadluliselwa ngokukhawuleza labuyiselwa kwiziko lolawulo lwenethiwekhi yeThree Mobile Group ngokusebenzisa isakhiwo senethiwekhi esise-China Mobile. Kwimizuzu elishumi, umsebenzi wokunxibelelana nokujongana noluntu sele uguqukile ukusuka kwimeko yenethiwekhi yesiqhelo uye kwisimo sokunxibelelana ngokusemandleni.
Ulwazi lwangaphakathi oluxelwe yiSichuan Mobile kulawulo lwezoNxibelelwano lwePhondo laseSichuan lubonisa ukuba kwisithuba seyure enye yenyikima yeLushan, uthungelwano lwasekhaya lwe-Ya'an Mobile luye lwaphindeka kangangezihlandlo ezili-12 kwinqanaba eliqhelekileyo.
“Ungathi inethiwekhi yonakaliswe kakhulu yinyikima. Nokuba inethiwekhi eqhelekileyo ayinakuxhasa isidingo esikhulu kangaka sonxibelelwano. " Iingcali zaphawula.
Ngokwenkumbulo ezinxulumene noko ngo-2008, kwiiyure ezintlanu emva kwenyikima yaseWenchuan, iselfowuni isisiseko ayifumananga mnxeba kwaye ayikwazanga ukufowuna. "Yonke inethiwekhi ibiphelelwe ngamandla." Ngexesha lenyikima yeLushan, "Xa inyikima isandula ukwenzeka, inethiwekhi nayo iqine kakhulu. Izinga lonxibelelwano liipesenti ezili-11 kuphela, kodwa emva kweyure enye, iqondo lonxibelelwano ngomnxeba libuyele ngaphezulu kwama-75%. "Isishwankathelo sesaziso senkcaso yokukhuseleka kwenyikima ithe Ukuqinisekisa ukuba "i-orenji ebomvu e-orenji ebomvu" inokusebenza ngokukhawuleza, yeyona nto iqhutywa rhoqo "ukuvumela iinkampani zenqanaba lesithili zinegama elincinci".
Yintoni enomdla kukusekwa kwesiqinisekiso sonxibelelwano esingxamisekileyo. Ekuqaleni, utyalomali olukhulu nolwakhiwo “lokulungela” lwenziwe ngendlela ephantsi, kwaye alukhange lutsale umdla kushishino.
Ngapha koko, uninzi lweemarike zisebenzisa I-drones ene-rotor ejikelezayo emininzi njengezikhululo zonxibelelwano ezingxamisekileyo. Ngaphantsi kweemeko ezikhethekileyo ezinje ngeentlekele zendalo kunye nokuphelelwa kwamandla, unxibelelwano olungxamisekileyo lunokuqinisekiswa ngokusebenzisa i-drones ehambileyo. Isikhululo sokunxibelelana esine-rotor drone based station yiteknoloji yonxibelelwano ephuhliswayo kunye netekhnoloji ye-rotor yedrode emininzi, ephucula amandla abantu okuhlangabezana neentlekele ezahlukeneyo zendalo kunye nokunciphisa ilahleko ebangelwe yintlekele. Kwimeko yeentlekele zendalo ezinje ngezikhukula, iinyikima zomhlaba, udaka lodaka, imililo, isaqhwithi sekhephu, kunye nesanti enkulu, xa umnatha wonxibelelwano odilikileyo wonakaliswa, kusetyenziswa inkqubo yonxibelelwano yedrode-rotor enamacala amaninzi inokwenza ngokukhawuleza inkqubo entsha yonxibelelwano. Nxibelelana nendawo yentlekele ngokukhawuleza okukhulu ukuze uqhubeke ngenkqubela phambili yomsebenzi wokuhlangula.
I-drone evalelweyo njengeqonga lonxibelelwano olukhawulezileyo inokuyisombulula ngokupheleleyo ingxaki yokukhubazeka kwesitishi sonxibelelwano ngexesha lokuphazamiseka kwentlekele. Inokuthwala imithwalo eyahlukeneyo yokunxibelelana enje ngee-ad hoc network radios, izikhululo zesiseko se-cluster micro, kunye nezikhululo zesiseko esincinci ngenkqubo yokunxibelelana yedrone ejikelezayo eneendlela ezininzi. , Ukwenza iindlela ngeendlela zokunxibelelana zesicelo sokunxibelelana, ukubonelela ngeenkonzo zonxibelelwano ngokukhawuleza kwindawo yeentlekele. Kwangelo xesha, uthungelwano lonxibelelwano olungxamisekileyo lwendawo enkulu egubungela umgama ongama-40 eekhilomitha nonxibelelwano olufutshane kunye neekhilomitha ezili-10 zonxibelelwano lwevidiyo ebanzi yenziwa phakathi kweziko likaxakeka elingasemva, ikomkhulu elise-site kunye neqela lokuhlangula.
Inxalenye ye-eriyali yesikhululo sonxibelelwano olungxamisekileyo iqulathe izixhobo zesikhululo sesiseko, i-eriyali yesikhululo seenqwelomoya, kunye nezixhobo zonxibelelwano zepasi eziqhutywa ngumthwali. Isiphatho esisezantsi esiphakamileyo yidone etyhidiweyo. Izixhobo zesikhululo sesiseko yendlela yokuhambisa ihamba ngeengcingo, kwaye indawo yomoya igxunyekwe kumphathi yitether. Inxalenye yomhlaba inenkqubo yokulawula umhlaba, izixhobo zothumelo kwidrone kunye nokudibana komhlaba, kunye nezixhobo zokuhambisa umhlaba zonxibelelwano kwinethiwekhi engundoqo. Isixhobo sokuhambisa umhlaba esiqhagamshelwe kunxibelelwano olusisiseko sinokuba sisixhobo sogqithiso lweentsinga, okanye izixhobo zothumelo ezingena kuthungelwano oluphambili ngohanjiso lweSatellite.
Ngexesha elifanayo, i-drone e-tetened ixhotyiswe ngumvelisi womhlaba, onokuthi uzuze ukumiswa komoya okungaphazanyiswanga iiyure ezingama-24. Inkqubo inokulayishwa kumaqonga afana neelori kunye neenqanawa. Ixhasa imo yolawulo lwemanyuwali kunye nemowudi yokulawula ngokuzenzekelayo. Intonga ilawula intshukumo yedrone; Kwindlela yokuhamba ngeenqwelo-moya ezenzekelayo, inokuqonda ukuhamba kwe-drone ngokuzenzekelayo kunye nokulandelwa kwesithuthi ngokuzenzekelayo.) Cwangcisa umphakamo webhiza ngesitishi esisezantsi ,xhasa inqaku lokuhamba, ukucofa iqhosha linye kunye nokufumana kwakhona Isitishi somhlaba, kunye neqonga lokushukuma (Xa imoto, inqanawa, njalo-njalo imile, idrone inyukela phezulu eqongeni, kwaye xa iqonga elishukumayo (isithuthi, inqanawa, njl njl) ishukumayo, idrone iyazilandela ngokuzenzekelayo iqonga.
Ixesha lokuposa: Aprili-17-2020